पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो ? मूल्य कति पुग्यो ? हेर्नुहोस् – Samabeshi Khabar
पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो ? मूल्य कति पुग्यो ? हेर्नुहोस्
२८ माघ २०७७, बुधबार २३:०२ by Samabeshi Khabar
काठमाडौं (ससं) । खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । बुधबार (आज) राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल तथा डिजेल र मट्टतिेलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँले वृद्धि गरिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।
अब काठमाडौंमा पेट्रोलको मूल्य ११२ र डिजेल र मटितेलको ९५ रुपैयाँ पुगेको छ । एलपी ग्यासको मूल्य पनि अब बढेर प्रति सिलिन्डर १४ सय रुपैयाँ पुगेको छ । निगमले सिलिन्डरमा २५ रुपैयाँ मूल्य बढाएको हो । खाना पकाउने ग्याँसको भाउ एक वर्षपछि बढेको हो ।
हवाई इन्धनको मूल्य हाललाई यथावत नै राखिएको छ । निगमलाई अझै पेट्रोलमा प्रति लिटर ५.१६ रुपैयाँ, डिजेलमा प्रतिलिटर ३.०१ रुपैयाँ र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर २९५.८३ रुपैयाँ घाटा रहेको निगमले जनाएको छ । यसअनुसार १५ दिनमा निगमको घाटा ७३.८७ करोड रहने निगमले जनाएको छ ।
Posted in आर्थिक, ब्यानर, समाचार